चन्द्रमामा पनि विशाल सुनखानी : पृथ्वीमा सुन कति बाँकी होला ? — Sanchar Kendra
एजेन्सी । पृथ्वीमा सुनखानीका विभिन्न तथ्यहरुमा बेलाबेलामा बहस हुने गरेको छ । यो बहससँगै वैज्ञानिकहरुले चन्द्रमामा पनि सुन रहेको तथ्य पुष्टि गरेका छन्। चन्द्रमाको सुन पृथ्वीसम्म ल्याउँदा उच्च लागत लाग्ने भएका कारणले आर्थिक हिसाबले लागत बढ्छ । त्यसैले चन्द्रमाबाट पृथ्वीमा सुन ल्याउन असम्भव भएको अनुमान गरिएको छ ।
वैज्ञानिकहरुले पृथ्वीमा जस्तै ठूला ठूला सुनखानी चन्द्रमामा रहेको पुष्टि गरिसकेका छन् । अन्टार्टिका महादेशमा पनि केही सुनखानी रहेको बताइन्छ। त्यहाँबाट पनि उत्खनन गर्न अत्यन्त महँगो पर्छ। समुद्रको पीँधमा समेत सुन छरिएर रहेको छ। त्यो निकाल्नु पनि अति महँगो पर्छ। विद्युतीय सामग्रीमा सुनको प्रयोग गरिन्छ। मोबाइल फोनमा पनि औसतमा केही पाउन्ड बराबरका सुन हुन्छन्। फ्याँकिएका मोबाइल फोनहरूबाट सुन झिकेर पुनः प्रयोग गर्ने प्रयास सुरु भइसकेको छ।
पृथ्वीमा कति बाँकी छ त सुन ?
सुनको एउटा राम्रो कुरा के हो भने खनिज तेलजस्ता अन्य स्रोतजस्तो यसको उपभोग गर्ने वित्तिकै नष्ट हुँदैन। यसको पुनरुपयोग गर्न मिल्छ।त्यसैले विश्वमा सुन कहिल्यैपनि सकिनेछैन। खानी रित्तिएपनि सुन रहिरहनेछ। गत महिना सुनको भाउले सबै पुराना कीर्तिमान भङ्ग गर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको भाउ प्रतिआउन्स (करिब २८.३५ ग्राम) २,००० डलरभन्दा माथि पुग्यो।
हुन त यो भाउ सुन व्यापारीहरूका कारण पुगेको थियो तर प्रश्न के उठेको छ भने संसारका खानीमा कति सुन बाँकी छ र यो कहिले सकिन्छ ?सुनको माग एउटा लगानीको रूपमा, हैसियतको प्रतीकको रूपमा तथा कैयौँ विद्युतीय उपकरणका मुख्य पार्टपुर्जाको रूपमा बढिरहेको छ।तर यो असीमित वस्तु होइन, एउटा बेला आउनेछ जब सबै सुनखानी रित्तिनेछन्।
विज्ञहरूले उच्च उत्खनन बिन्दुको कुरा गर्छन् जब कुनै एक वर्षमा उत्खनन गर्न सकिने उच्चतम परिमाणमा सुन झिकिन्छ। कतिपयको विश्वास छ संसार त्यो बिन्दुमा पुगिसकेको छ। सन् २०१९ मा सुनखानीको कुल उत्पादन ३५३१ टन पुगेको जुन सन् २०१८ मा १ प्रतिशतले कम रहेको विश्व सुन परिषद्ले जनाएको छ। त्यो वर्ष सन् २००८ यता पहिलोपटक उत्पादनमा अघिल्लो वर्षभन्दा कमी आएको थियो।
आगामी वर्षहरूमा खानीबाट सुन उत्खननमा केही कमी आएपनि उच्चतम बिन्दुमै पुगिसकेको भन्न अलि चाँडो हुने परिषद्का प्रवक्ता ह्याना ब्र्यान्डस्टेटरले बताए। खानी कम्पनीहरूले जमिनमा कति सुन बाँकी छ भनेर दुई किसिमबाट अनुमान गर्छन्। सुन उत्खनन कार्य अझ कठिन र महँगो हुँदै गइरहेको छ । अमेरिकी भौगर्भिक सर्भेले गरेको हालको अनुमान अनुसार सुनको रिजर्भ्सको परिमाण ५०,००० टन रहेको छ।
अहिलेसम्म संसारले १,९०,००० हजार टन सुनको उत्खनन गरिसकेको छ। अर्थात् लगभग २० प्रतिशत सुन बाँकी छ। तर यो परिमाण परिवर्तनशील हुने गर्छ। नयाँ प्रविधिहरूले थप परिमाणको सुनलाई आर्थिक रूपमा फाइदा हुनेगरी उत्खनन गर्न सकिने बनाउन पनि सक्छन्। रोबटिक्स तथा आर्टफिशल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगले उत्खनन प्रक्रिया परिष्कृत गरेर त्यसको लागत घटाइदिन सक्छ।
ठूला खानी कहाँ छन् ?
इतिहासमै सुनको सबभन्दा विशाल खानी दक्षिण अफ्रिकाको विटवाटरस्रान्ड बेसिन रहेको छ। विश्वको एकतिहाइ परिमाणको सुन त्यहाँबाट मात्र उत्खनन गरेर निकालिएको छ। अन्य ठूला खानीमा दक्षिण अफ्रिकाकै मपोनेङ खानी, अस्ट्रेलियाका सुपर पीट तथा बोडिङ्टन खानी, इन्डोनेशियाको ग्रास्बर्ग खानी तथा नेभाडा अमेरिकाका खानी हुन्।
अहिले विश्वमा सबभन्दा धेरै सुन उत्खनन गर्ने मुलुक चीन हो भने क्यानडा, रुस तथा पेरू पनि ठूला उत्पादक हुन्। कम्पनीहरूमध्ये सबभन्दा ठूलो सुनखानी कम्प्लेक्स नेभाडा गोल्ड माइन्सको छ जसको बहुमत स्वामित्व ब्यारिक गोल्डसँग छ। नयाँ खानीहरू अब कमै फेला पर्न थालेका छन्। त्यसैले धेरै उत्पादन पुरानै खानीहरूबाट भइरहेका छन्। बिबिसीबाट साभार